ILIZWI UK 2021 UMHLA WOKUQALISA | ABAQEQESHI, IFOMATHI ENTSHA KUNYE NEENDABA ZAMVANJE- IRADIO TIMES - IMIBONISO YEETALENTE
Ilizwi UK 2021: Ixesha lokuqalisa, abagqatswa, iijaji kunye nabaphumeleleyo
Eyona Imiboniso Yeetalente
Ilizwi lokugqibela lase-UK libone umqeqeshi omtsha u-Anne-Marie ephumelela ephumelele imvumi uCraig Eddie, ophumelele uthotho lwe-2021 phezolo.
Abaphumezi bokugqibela abane ibinguCraig Eddie, weQela u-Anne-Marie, u-Okulaja, ovela kwiQela will.i.am, uHannah Williams weQela uTom Jones, uGrace Holden, weQela uOlly Murs.
Eyokugqibela ibonakalisa imvumi nganye idlala kabini-icula yodwa kwaye ibambe nomqeqeshi wayo, emva koko kwafika ivoti yokuthatha isigqibo sokuba ngubani oza kungena kwezi zimbini zokugqibela. UGrace noCraig baya entloko, phambi kokuba kubhengezwe ukuba uCraig ufumene ezona voti zininzi zivela eluntwini, kwaye wathweswa isithsaba sokuphumelela i-The Voice UK ngo-2021.
Nciphisa isandi se @iqosweb Ingoma yoqobo ephumeleleyo 'Yiza uchithe ixesha lam'! @Anemarie #IlizwiUK pic.twitter.com/Q4jOKkazze
-Ilizwi lase-UK (@thevoiceuk) Ngomhla wamashumi amabini ku-Matshi 2021
UCraig ubonakale elahlekile ngenxa yamazwi emva kokuphumelela kwakhe, ngaphambi kokuba axelele ababukeli: Ndisothukile nangoku, ndiyabulela kubo bonke, enkosi eScotland, enkosi kuye nabani na ovotileyo, enkosi, Anne-Marie, ngokundikholelwa kwaye ukukholelwa kum kwaye undise kule ndawo kwivoti yoluntu.
Ngokwenyani andikwazi ukubonisa uxabiso lwam ngokwaneleyo kuye wonke umntu ongatshatanga oye wavota.
Ophumeleleyo kunyaka ophelileyo, uBlessing Chitapa naye uye wakhwela eqongeni esenza ingoma yakhe entsha ethi I Smile.
Ilizwi lokugqibela lase-UK liyafumaneka ukusasaza kwi-ITV Hub ngoku.
Ngoobani abakhuphisana nabo kwiLizwi UK 2021?
Abaqeqeshi beLizwi UK ngoku banesenzo esinye kumdlalo wokugqibela, ngubani oza kukhuphisana nesihloko.
Unokufunda ngakumbi malunga Ilizwi UK 2021 abagqatswa Apha.
Ngubani ophumelele iLizwi UK 2020?
Uthotho lwe-2020 luphumelele u-Blessing Chitapa oneminyaka eli-18 ubudala, owayeqeqeshwa ngu-Olly Murs.
Imvumi yabetha isenzo sikaSir Tom Jones uJonny Brooks kumjikelo wokugqibela.
Ukuthetha no RadioTimes.com , UBlessing uveze indlela aphantse wakhetha ngayo umcebisi owahlukileyo, esithi: [bendicinga ukuba] ngethemba ukuba bobane bajike, ndinethemba lokuba uMeghan Trainor uzakuba nguye endimkhethayo. Kodwa kucacile andizifumenanga zane emva koko wajika uOlly.
Wongeze wathi: Ndiva ngathi u-Olly wayenzelwe mna. Undifundise kakhulu kwaye ndonwabile nokuba engatsho ukuba lukhetho oluphosakeleyo, kodwa ndiyavuya ukuba u-Olly ngokwenene waba ngumqeqeshi wam kwaye undigcinile kulo lonke ukhuphiswano kwaye ndikwazi ukumthemba kwaye wakholwa mna kakhulu.
Labuya nini iLizwi UK ngo-2021?
Uthotho lwe-10 luqale kwi-ITV NgoMgqibelo umhla wesi-2 kuJanuwari ngo-8: 30 ebusuku.
Zizakuba zizi-12 iziqendu zizonke, ezibandakanya uphicotho-zincwadi olungaboniyo, iiMfazwe, owandulela owamanqam nowokugqibela.
Kwakukho nefomathi entsha ebizwa ngokuba yiBhloko. Ngexesha lophicotho-zincwadi olungaboniyo, abaqeqeshi abane ngamnye wayenethuba lokumisa omnye umqeqeshi ekongezeleleni imvumi kwiqela labo.
Umqeqeshi ngamnye unikwe ithuba elinye kuphela lokusebenzisa iqhosha labo elithi 'Vimba' ukuzama ukukhusela elona qela libalaseleyo- kunye nokwenza buthathaka amathuba abanye abaqeqeshi.
Kutheni kungekho qonga lokunkqonkqoza kwiLizwi UK 2021?
Ukulandela umjikelo wamadabi, abagqatswa bavame ukungena kwinqanaba lokunkqonkqoza apho amagcisa enza 'ingoma yokubulala' yokukhetha kwabo kwaye abaqeqeshi bakhetha amalungu amathathu kwiqela labo ukuba baye kumdlalo wokugqibela.
Nangona kunjalo, kulo nyaka umboniso wenze utshintsho kwifomathi kwaye wagqiba kwelokuba ahambe ngaphandle kwalo msebenzi, endaweni yoko wathumela zonke izinto ezintandathu kwiqela ngalinye ukuya kumdlalo wokugqibela.
Umnumzana Tom Jones, will.i.am kunye no-Olly Murs babuya njengabaqeqeshi kulo nyaka, kunye nembasa ephumeleleyo u-Anne-Marie othathe indawo kaMeghan Trainor kwiqela lenjongo.
UMQEQESHI OMTSHA KLAXON! @Anemarie uyangena #IlizwiUK iqela lama-2021 pic.twitter.com/JxsCrXaOD2
-Ilizwi lase-UK (@thevoiceuk) Nge-12 ka-Okthobha ka-2020
Kutheni le nto uMeghan Trainor engagwebi Ilizwi UK 2021?
UMeghan Trainor ubhengeze ukuba akazukubuya kuthotho lwe-2021, kuba uceba ukuchitha ixesha elininzi nosapho emva kokubhengeza ukukhulelwa kwakhe kokuqala nomyeni wakhe uDaryl Sabara.
Ukuthetha ngeendaba, uMqeqeshi wathi: Ndibe nexesha elimnandi lokuba ngumqeqeshi kwiLizwi lase-UK kwaye ndichitha ixesha nomntu wonke!
Ndinqwenela ukubuyela kwiXesha le-10, kodwa ndithatha ixesha ukuqala usapho lwam kwaye ndifuna ukukhuseleka ngenene ngezithintelo zangoku zokuhamba. Ndiza kuniphosa nonke kakhulu kwaye ndinethemba lokukubona kungekudala!
Ilizwi UK longeze: Siyavuyisana kakhulu noMeghan ngeendaba ezimnandi azilindeleyo kumntwana wakhe wokuqala. UMeghan ubengumqeqeshi omangalisayo kwiLizwi lase-UK kwaye sijonge phambili ekuboneni uMeghan ebuya ukuphela kothotho lwethoba, eza kungekudala kwi-ITV.
Wonke umntu kwilizwi lase-UK nakwi-ITV angathanda ukunqwenelela uMeghan okona kulungileyo ngo-2021 nangaphaya.
Iimvumi ezingaqhelekanga ezingama-9 ziphume zaya kwinqanaba elithile #IlizwiUK I-Semi-Final, enabaphulaphuli ababonakalayo kunye nomqeqeshi obonakalayo ocofa kwi-LA! https://t.co/V5eeEuXDBX pic.twitter.com/sftqkm2VKf
-Ilizwi lase-UK (@thevoiceuk) NgoNovemba 8, 2020
Ngubani umqeqeshi omtsha u-Anne-Marie?
U-Anne-Marie yimvumi kwaye ungumlobi-wengoma, owayenenombolo engu-1 eculwa yi Rock Clean Bandit's, ene-Sean Paul, kwaye wayitshatisa ngempumelelo nge-single Alarm, Ciao Adios, Abahlobo nango-2002. Le nkwenkwezi yakhupha icwecwe lakhe lokuqala elithi Thetha Wakho Ingqondo kwi-2018, eyambona eyena mculi mkhulu wokuthengisa kuloo nyaka. Utyunjwe amabhaso amane kwii-Brit Awards zango-2019, kubandakanya negcisa leBritish Solo Artist.
U-Anne-Marie ukhuphe usuku lokuzalwa olunye kwi-albhamu yakhe yesibini ye-studio ebutsheni balo nyaka, kunye nokuba nguMncinci, kunye nomlobi waseMelika u-Doja Cat.
Kwindima yakhe entsha njengomqeqeshi kwiLizwi 2021, u-Anne-Marie uthe: Ndonwabe kakhulu ukujoyina uSir Tom, will.i.am kunye no-Olly njengomqeqeshi omtsha kwiLizwi UK. Andikwazi kulinda ukusebenza neetalente ezingakhange zifumaneke! Wahoooooo!
will.i.am wongeze: Ndonwabe kakhulu ngeli xesha lonyaka elitsha kwaye ndamkela u-Anne-Marie njengoMqeqeshi wethu omtsha kwiLizwi UK. Ngomculo wakhe wokubhala, ukucula kunye nezakhono zomsebenzi, kunye nendlela yakhe yokuyixela, le nto imenza abe longezo olufanelekileyo lokudibanisa kweli xesha lonyaka.
Ngubani onika iLizwi UK 2021?
U-Emma Willis ubuyile njengomsasazi weLizwi 2021. UWillis ubambe uthotho ukusukela oko wathatha indawo kuHolly Willoughby ngo-2013 xa kwakusasazwa umboniso kwi-BBC One.
Umenzi wezwi wase-UK 2020 u-Emma Willis
Ilizwi UK 2021 yokugqibela iyafumaneka ukusasaza kwi-ITV Hub. Ukuba ujonge ngaphezulu ukubukela jonga isikhokelo sethu seTV. Ndwendwela indawo yethu yokufumana ezinye iindaba zokuzonwabisa.
Ishedyuli yomdlalo wetrone
Iindawo ezothusayo zesabrina inxenye 3
Ngubani ugqirha elona gama lokwenyani
iimfazwe zeenkwenkwezi ngokulandelelana kweemfazwe
mdala kangakanani ukapteni waseMelika
Ileta yokugqibela evela kwisithandwa sakho